Homeसमाचारआज पनि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?
March 5, 2021 admin समाचार 6331
काठमाडौ नेपाली बजारमा साताको अ’न्तिम दिन सुनको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ । बिहिबार प्रतितोला ८६ हजार ५०० रुपैंयामा का’रोबार भएको सुनको मुल्य आज तोलामा ९०० रुपैंयाले घटेर प्रतितोला ८५ हजार ६०० रुपैंयामा कारो’बार हुने सुनचाँदी व्यवसाय महा’संघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मुल्य आज प्रतितोला ८५ हजार १५० रुपैंया रहेको जना’इएको छ । त्यस्ते आज चाँदीको मुल्य पनि घटेको छ । आज चाँदी तोलामा ३५ रुपैंयाले घटेर प्रतितोला १२ सय ५० रुपैंयामा कारो’बार हुने महासंघले जनाएको छ ।
यो पनि , सजिलो डाइन : क्यूआर’बाट खानाको मेन्यू, सेकेन्डमै अडर !
काठमाडौँ । विश्व डिजिट’लाइज हुँदैछ । अहिले हरेक क्षेत्र, काम कारबाहीदेखि मानव संसाधन, उपभोग गर्ने सेवा सुविधाहरुमा समेत डिजि’टलाइजेसन (प्रविधीकरण) हुँदैछ । बढ्दो प्रविधि प्रयोगसँगै पछिल्लो समय मान्छे यान्त्रीकरण एवं प्रविधिसँग आ’कर्षित हुँदैछन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– ‘सजिलो डाइन डट्कम’ । होटल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसो’र्टहरुलाई लक्षित गर्दै सजिलो डाइन (Sajilo Dine) ले डिजिटल मेन्यू सफ्टवेयर ‘सजिलो डाइन डट्क’म’ ल्याएको छ ।
उच्च’तम प्रविधिको प्रयोग गर्दै कम्पनीले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खाना तथा नास्ता गर्न जाने क्लाइन्ट (उपभोक्ता) र स’र्भिस (कम्पनी)लाई सहज हुनेगरी डिजिटल क्यूआर स्क्यानर मेन्यू उपलब्ध गराएको हो । यो मेन्यूमार्फत विद इन सेके’न्डमै ग्राहकहरुले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा उपलब्ध परिकारको मेन्यू हेर्न र अडर गर्न सक्नेछन् भने कम्पनीले सोही बमो’जिम अडरअनुसारको परिकार उपलब्ध गराउन सक्छन् । यो सुविधाले समयको बचतका साथै अना’वश्यक झन्झट र मान्छे कुरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थि’तिको अन्य गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।
‘आजको मान्छे छि’टोभन्दा छिटो सेवाका साथ सन्तुष्टि पनि चाहन्छ । बिना झन्झट जसले सहज रूपमा छिटोभन्दा छिटो सेवा सुवि’धा प्रदान गर्छ त्यो नै अब्बल ठहरिन्छ । अझ होटल, रेस्टुरेन्ट तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा त यो अति नै आव’श्यक छ । त्यसैले यसको एउटै विकल्प हो– सजिलो डाइन डट्कम ।’ सजिलो डाइनका स’ञ्चालक तथा व्यवस्थापक अनुपम गोयलले भने, ‘समयको माग र आवश्यकतालाई नै लक्षित गर्दै हामीले बजारमा सजिलो डाइन डट्कम ल्याएका छौँ । यो सफ्टवेयर होटल रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्ट सञ्चा’लक उपभोक्ता जोकोहीले सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन् ।
त्यसो त सजि’लो डाइन डट्कम होटल तथा रेस्टुरेन्टका लागि उपलब्ध गराइएको एक डिजिटल मेन्यू क्यूआर स्क्यानर हो । यसबाट ग्राहकहरुले सजिलै आफ्नो मोबाइलमार्फत क्यूआर स्क्या’नर गरेर खानाका परिकार हेर्न र अडर गर्न सक्छन् । त्यसका लागि मोबाइल फोनमा जुनकुनै क्यूआर स्क्या’नर भए पुग्छ । पछिल्लो समय बैङ्क, बिमा, स्कुल, सेवा क्षेत्र तथा सपिङ सेन्टरहरुमा डिजिटल क्यूआर स्क्यानरमार्फत भुक्तानी गर्ने चलन चलेको बेला होटल तथा रेस्टुरेन्टको मेन्यूस:मेत क्यूआर स्क्यानरमा उप’लब्ध गराइने प्रविधिको विकास भएको हो ।
गोयलका अनु’सार यस्तो सुविधा जुनकुनै होटल, रेस्टुरेन्ट तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रले प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसका लागि कम्पनीले न्यूनतम शुल्कमा नै सजिलो डाइन सुवि’धा प्रदान गरिरहेको छ । वार्षिक तीन हजार रुपैयाँमै कम्पनीले सुविधा प्रदान गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म राजधा’नीका विभिन्न २३ वटा होटल, रेस्टुरेन्ट तथा विविध हस्पिटालिटी सेवा केन्द्रहरुले यस्तो सजिलो डाइन क्यूआर स्क्या’नर प्रयोग गरिरहेका छन् ।
जस’मा होटल तथा रेस्टुरेन्ट एट्टिज, अलिस, बेक स्टेसन, ब्रिक्स, बुनग्ल्वो, द बर्गर हाउस एन्ड कन्सी फ्राइड चिकन, क्या’प्टेन एग, काभिर, डाइनिङ पार्क, फ्रेन्च बेकरी, ग्रिन भ्याल्ली, हिमालयन जाभा वसन्त’पुर, होटल सब्रिना, जा अपस्टेयर्स, कपन भ्याली रिसोर्ट, मिला, टाइडविट्स, तिप्ती, पीपी पिज्जा महारा’जगञ्ज, सन्ना, विन्टो, पीपी पिज्जा टङ्गाल लगा’यतका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा सजिलो डाइनको प्रयोग भइ’रहेको छ । – इताजा खबरबाट
April 25, 2021 admin समाचार 5427
December 30, 2020 admin समाचार 10214
March 12, 2021 admin समाचार 5429